Kooxda Taageerada Ardayda (SST) | Adeegyada Taageerada Ardayda | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iskuullada Minnetonka waxay taageeraan nidaamyo fara badan oo iskudhafan oo ah PK - Dugsiga Sare. Ardayda waxay galaangal u yeeshaan nidaamyada taageerada iyagoo adeegsanaya dhismaha Kooxda Taageerada Ardayga (SST). Macluumaad fara badan ayaa dib loo eegaa marka la tixgelinayo baahida wanaagsanaanta ardayga, waxaana kuwaan ka mid noqon kara waxqabadka tacliimeed, akhlaaqda iyo gudbinta edbinta, booqashooyinka qolka caafimaadka, baahiyaha daryeelka daryeelka caafimaadka, Qeybta 504 , iyo gudbinta loogu talagalay waxbarashada gaarka ah, oo ay weheliso fikradda qoyska ama walaac la muujiyey.
Dugsi kastaa wuxuu leeyahay Kooxda Taageerada Ardayga (SST) Kooxda Taageerada Ardaydu waxay si joogto ah ula kulmaysaa ardayda tacliinta iyo bulshada, shucuurta, iyo wanaagga ardayda. SST waxay go'aan ka gaartaa taakuleynta waxqabadka iskuxiran. Kooxda ayaa ka kooban shaqaalaha taageerada dhismaha iyo hoggaanka dhismaha, oo ay weheliyaan macallimiinta aasaasiga ah iyo adeeg bixiyaasha kale ee la xiriira. Dad dheeri ah ayaa la keenay iyadoo loo eegayo sida loogu baahan yahay. Waalidka waa la ogeysiinayaa oo lagala tashanayaa baahida ardayga iyo go'aanada. SST waxay si joogto ah ugu kulantaa dhisme kasta.
Buug-yaraha Kooxda Taageerada Ardayga
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee wanaagga ardayga ayaa ah inta badan xaadiritaanka, dabeecadda, jimicsiga iyo waxqabadka akadeemiyadeed. Kooxda Adeegyada Taageerada Ardaydu waxay isticmaalaan macluumaad kala duwan si ay ula socdaan baahiyaha ardayda ee aagagga koritaanka tacliinta iyo guusha, oo ay weheliso baahiyo bulsheed, shucuur, dabeecad iyo jidheed.
Nidaamka Isku Xirka Taageerada (TSS) ama Nidaamyada Taageerida Badan (MTSS) waa dallad guud oo ay ku jiraan Jawaabta Wax ka-qabashada (RTI) iyo taageerooyinka u horseedaya wanaagga ardayga. Arday kasta wuxuu ku helayaa hagitaan iyo taageero asaasi ah fasalka gudahiisa, oo loo yaqaan Tier One ama Universal Support. Ardayda qaar waxay u baahan yihiin waxbarasho dheeri ah, taas oo loogu yeerayo Tier Labaad, iyo koox yar oo ardayda ah ayaa helaya faragelinta iyo taageerada ugu badan, ee loo yaqaan Tier Saddexaad. Nidaamkan iskuxiran waxaa loo isticmaalaa taageerooyinka tacliinta iyo sidoo kale taageerooyinka dhaqanka iyo dhexgalka.
Tier 1: Waxbarida Koorsada-Xulashada Guud
Tier 2: Kooxo iyo Taageero Dheeri ah
Tier 3: Wax ka qabasho Degdeg ah
Tier 1 waa barashada guud iyo taageerida barnaamij ee ardayda oo dhami helaan. Tani waa tilmaamta la siinayo ardayda oo dhan iyada oo loo marayo manhajka aasaasiga ah, casharro kaladuwan, baaritaanka, korjoogteynta horumarka, iyo adeegyada taageerada ballaaran ee dugsiga. Xulashooyinkaan caalamiga ah waxaa loogu talagalay in lagu wanaajiyo guusha lana yareeyo caqabadaha xagga barashada ardayda badankood.
Tusaalooyinka Tier 1 waxaa ka mid ah:
Fasalka Jawaabta leh
Barnaamijka Ka Hortagga Xoog u sheegashada Olweus
Tier 2 waxaa loo xushay ikhtiyaarada dheeriga ah ee lasiiyay kooxo yar oo ardayda ah oo aan buuxin halbeegyadooda. Kobcinta iyo taageerooyinka ayaa la bixiyaa si loo yareeyo suurtagalnimada dhibaatada sii kordheysa. Taageerada Tier 2, ardayda waxaa lagu cadeeyaa kulamada SST. Kooxda Tier 2 waxay caadiyan ka kooban tahay koox yar, oo loo kala soocay baahi guud / mowduuc halkii ay ka noqon lahayd fasalka.
Tusaalooyinka kooxaha 2aad ee Kooxaha Taageerida waxaa ka mid noqon kara:
Haddii ardaydu ku jireen Tier 2 in kabadan 9 - 12 toddobaad oo ay sii wadaan halganka, waxaa loo wareejin karaa taageerada Tier 3.
Taageerayaasha Tier 3 waa kuwo aad u dagdag ah waxaana ku jiri kara:
Gudaha daryeelka caafimaadka maskaxda
U diritaanka kooxda-ilmaha daraasadda ama qiimaynta
U diritaanka kooxda ka baxsan